You no na 1% nke LinkedIn? | Martech Zone
Ọnụ Ọgụgụ. Mgbe ụfọdụ ha na-akwanye m akụ. Taa bụ nnukwu ihe atụ. LinkedIn wepụtara ozi email na-ekele ndị otu ha nọ na pasent kacha elu nke profaịlụ elele. Nke a bụ igodo… profaịlụ anya. Nke a bụ ihe email dị ka… otito nke enyi Daren Tomey:
Daren bu chaja siri ike ma burukwa klọb 1% nke ndị isi ahịa na mba ahụ. Agaghị m anapụ ya nke ahụ. Ajụjụ bụ gịnị kpatara profaịlụ Daren ji bụrụ otu n'ime elele anya kacha elu? Kedụ ka ị ga - esi banye klọb pesenti 1?
Ọkara nke akụkụ ahụ dị mfe, ọkara nke ọzọ siri ike.
Nke mbu, Daren bu oru ahia na Zmags - an dijitalụ ekwusara n'elu ikpo okwu (na onye ahịa). Ahịa dị obi ọjọọ. Ntụgharị dị elu na ụlọ ọrụ na-adị mgbe niile -achọ maka talent. Isi ihe dị ebe a bụ -achọ. Na-achọ = echiche. Yabụ, tinye njikwa azụmaahịa ma ọ bụ onye isi azụmaahịa na profaịlụ gị ma ị ga-eweli. N'ime netwọkụ m, ọtụtụ n'ime ndị kacha elu na-ere ahịa.
Nke abuo, rụsie ọrụ ike na njikọ na LinkedIn. Daren maara banyere onye ọ bụla nọ na mba ahụ site na nnukwu ụlọ ọrụ ọ bụla. Ọ bụ onye ọrụ ntanetị dị egwu ma nwee ọtụtụ mmekọrịta. A na-akwanyere ya ùgwù na sọftụwia na ụlọ ọrụ teknụzụ yana onye bụ ndị isi ahịa. Na njikọ ndị ọzọ, nke ka mma ohere a na-ele profaịlụ ya anya.
Buzzfeed mere ọmarịcha ọrụ na-agbasa nọmba na ikwutọ ịkatọ nkekọrịta ekesara nke mere n'ofe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mgbasa ozi a bụ shill… ọ na-emegharị ndị mmadụ ka ha na-ekerịta akara LinkedIn - nke pụtara ìhè na nkwukọrịta na-aga.
Nke a bụ ụdị mkpọsa nke na-akpali m akụ. Pasent bụ a mkpari nọmba na pụtara ihe ọ bụla… n'ezie ihe ọ bụla. Y’oburu na ibu ihe amara n’ubi gi nke choro banyere onye i jikotara ya na LinkedIn, inwetaghi otu n’ime email ndia. Ma ọ bụrụ na ị nọ na ụlọ ọrụ na oké mbanye na a nnukwu netwọk… na ị na-crappy na ọrụ gị… ị ka natara otu n'ime ndị a ozi ịntanetị.
Ntughari na-abụrụ ọnụ, endorsements wepụrụ… naanị ịgwa onye ha na ha pụrụ iche ka ha wee keta ya. Ọ rụkwara ọrụ n’enweghị ntụpọ.
Echetara m otu n'ime uwe mwụda m: Are pụrụ iche. Dị ka ndị ọzọ.
Tags: ikikeLinkedInemailin emailakara
Etufula Olu Gi
Ebook: Gini bu ahia ndu?
Feb 11, 2013 na 5:49 PM
Doug mara mma ma chee echiche na agbanyeghị mkpọsa a bụ shill - ihe ọ chọrọ iji nweta ndị mmadụ na 1% ma ọ bụ 5% ma ọ bụ 10% na-eche echiche bụ - hmmm Im doro anya na ọ na-atọ ụtọ karịa ka m chere 🙂 ma eleghị anya m chọrọ ịma onye bụ na elele profaịlụ m? Na Maka naanị $ 16 (ma ọ bụ karịa) - Enwere m ike ịchọpụta.
Na-akpali mmasị mara otú ọtụtụ adịchaghị ịrịba ama acha ọkụ ha nwetara 🙂
Feb 11, 2013 na 11:19 PM
Ezigbo ajụjụ, Duncan!
Courtney Ramirez kwuru
Feb 11, 2013 na 6:07 PM
Daalụ maka ịlele na nke a. My 5% bụ enyo. Adị m ọkara arụsi ọrụ ike, mana ezughi ezu iji nweta ikike dị elu. Duncan nwere ezigbo ihe dị n'okpuru - a na m eche etu ego ole e rere n'ihi ya?
Feb 11, 2013 na 6:36 PM
Ihe amamihe dị na ya? Amaghị m ihe ọ bụla banyere ya ruo mgbe m gụrụ ya ebe a Doug - shill ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ rụrụ ọrụ.
Feb 12, 2013 na 12:18 PM
Ọ mere. Rie ude.
Feb 12, 2013 na 12:43 PM
Enwetakwara m nke a n'ụtụtụ a. Echere m na edepụtara aha gị n'akụkụ akwụkwọ mgbasa ozi na - enyere aka.
Feb 12, 2013 n’elekere 11:20 nke abali
Douglas, ọmarịcha ọkwa. Ozugbo m nwetara 5%, echere m na "Abụ m otu na 10M… ọ bụghị nke pụrụ iche.) M nyefere onwe ya ịkekọrịta ya na LinkedIn (naanị); mana akwụghị m ụgwọ maka ọrụ adịchaghị iji chọpụta nkọwa ndị ọzọ. Ikekwe ị kwesịrị iji ngalaba nkọwa a iji hụ ihe mmeghachi omume ndị ọzọ ndị mmadụ nwere…
Feb 12, 2013 na 12:48 PM
Kpamkpam nabata nkọwa ma ọ bụrụ na mkpọsa ahụ gara nke ọma ma ọ bụ na ọ nweghị. Echere m bụ na, n'ihi na ọ bụ ihe idide azụ na ịgbanye ụdị izipu ozi, ọ naghị eme nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ nwetara ọtụtụ elebara anya.
Feb 12, 2013 n’elekere 11:23 nke abali
Echiche m kpọmkwem. M nụrụ na ọbụna ndị uwe ojii ndị mere ihe "ezigbo cop, ihe ọjọọ cop" na-eme n'oge ajụjụ ọnụ na-ada n'ihi na ọ onwe ha. Yabụ na ọ bụ mụ na 5% akara m sitere na LinkedIn. Ọ bụ ezie na amaara m na ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị egwu (anaghị m enweta * na * ọtụtụ echiche) enwere m ike ịmanye m tweet banyere ya! Agbabeghị m.
Feb 12, 2013 na 4:49 PM
Adị m ezigbo ọrụ na LinkedIn na m nwekwara nzube maka ịbawanye netwọkụ m. Echere m na ihe omuma a bu ihe omuma na ahia ahia bu ihe omuma. Ọ dị m ka ya bụrụ na m chere banyere ya. Doug, i nwere otu iko bụ ọkara efu echiche na nke a. Ọ bụ naanị ezigbo nri maka echiche… 1%, 5% ma ọ bụ 10% nke 200 nde bụ nnukwu otu a ga-etinye n'ime, ee. Ma o sina dị, ọ bụ ozi ozi. Emere m ọkwa m tweet Echere m na ọ dị mma. Dika onye ahia ahia na onye ahia, obi di m uto ka m soro na ndi ohuru (ma obu uto) ahia ma obu ahia. A ga-ekwukwa eziokwu, enwere m ike tweeted ihe ole na ole na-atọchaghị ụtọ. Mkparịta ụka ị bidoro maka nke a bụ ọrịre siri ike karịa nke sitere na ọkwa ọkwa LinkedIn na nso nso a banyere profaịlụ elele anya. Echere m na ị nwere ike igwu egwu n'aka ha.
Enwere m ekele maka echiche gị, ọ dị mma mgbe niile iji lee ihe anya site na onye ọzọ. Daalụ maka ịmalite mkparịta ụka a!
Feb 13, 2013 n’elekere 3:13 nke abali
Akwa post. Enwetara m email na-eme ka m mara na m nọ na 5% na enwere m obi ọjọọ - isi ihe ndị a kwekọrọ na ihe m na-eche. Ọ bụ ezie na m ghọtara ahịa dị n'azụ ya, eziokwu nke okwu a bụ na ime ihe n'eziokwu dị mkpa karịa ịnwa ime ka onye ọrụ ahụ nwee mmetụta na-ekpo ọkụ ma na-agba ume n'ime.
Feb 14, 2013 na 6:13 PM
Damn, Doug! Anọ m na-enwe mmetụta pụrụ iche banyere onwe m.
Feb 14, 2013 na 6:23 PM
@ facebook-1728428996: disqus You're ka bụ onye pụrụ iche Mike! Dị nnọọ ka ndị ọzọ else
Feb 18, 2013 na 7:16 PM
Gị (na m) anọghị n'etiti 1% kacha elu nke ndị otu LinkedIn.
In nọ na profaịlụ 1% a na-elekarị anya n'etiti ndị otu, profaịlụ abụọ, ndị mmadụ abanyela otu oge wee chefuo ya, ndị nwụrụ anwụ, ndị aghụghọ, ndị aghụghọ na ndị spammers.
Mana, anyị niile bụ ihe efu ka anyị kesara ya. Odi nma diri anyi!
Feb 20, 2013 na 1:41 PM
Hụ uwe elu ahụ n'anya. Ọ na - agbakọta usoro mgbasa ozi na 2013.